चार्ट | अक्टोबर 2021
यसको अर्थ के हो जब चन्द्रमा मंगलको साथ छ?
यसको अर्थ के हो जब चन्द्रमा मंगलको साथ छ? यो संयोजनले मानिसहरूलाई साहस दिन्छ, साहसिक कार्यको लागि प्रेम र असामान्य समाधानहरू फेला पार्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। पारिवारिक वातावरणमा उनीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर राम्ररी जान्दछन् र उनीहरूलाई यो कुरा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ कि अरूहरूको पनि आफ्नै ठाउँमा अधिकार छ।
चन्द्रमाको कन्ज्याक्ट बुध भनेको के हो?
चन्द्रमाको कन्ज्याक्ट बुध भनेको के हो? तपाईंको जन्म चार्टमा चन्द्रमा बुधको संयोजनको साथ, तपाईं सम्भवतः धेरै अभिव्यक्तिपूर्ण र शब्दहरूसँग राम्रो हुनुहुन्छ, यद्यपि यो प्रकाश पछि जीवनमा आउँदछ। जब चन्द्रमाको कन्ज्याक्ट बुध पारगमन हुन्छ, तपाईंलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न र सामान्य भन्दा बढी रोमान्टिक हुन आमन्त्रित गरिन्छ। २०१।
तपाईंको जन्म चार्टले तपाईंलाई के भन्छ?
तपाईंको जन्म चार्टले तपाईंलाई के भन्छ? संक्षेपमा, तपाईंको जन्म चार्टले वर्णन गर्दछ जहाँ ग्रहहरू तपाईंको जन्म मिति र समयमा आकाशमा थिए। नेप्च्यूनका अप्सरा भन्छन्, 'यो तपाईंको जन्म भएको समयमा ग्रहहरू वा ताराहरूको स्थितिको स्नैपशट वा नक्शा हो।' 'प्रत्येक ग्रहले हाम्रो जीवनको पक्षमा फरक प्रभाव पार्छ, र यसले त्यो प्रबुद्ध गर्दछ।' .१। २०२०।
म कसरी मेरो चार्टमा पक्षहरू फेला पार्न सक्छु? केवल चार्टलाई हेरेर तपाईं कसरी पक्षहरू पत्ता लगाउनुहुन्छ? पहिलो चरण: प्रत्येक चिन्हको लागि तत्त्व र मोड सम्झनुहोस्। तिनीहरूलाई राम्रोसँग सिक्नुहोस्। चरण दुई: पार्टनर तत्त्वहरू याद राख्नुहोस् यो सजिलो छ यदि तपाईं आफ्ना तत्वहरूलाई जान्नुहुन्छ। चरण तीन: विपरीत जोडीहरू याद गर्नुहोस्। तपाईले यो दृश्यमा पनि चिन्न सक्नुहुन्छ।
जन्मजात चार्टको १२ घरले के प्रतिनिधित्व गर्छ?
जन्मजात चार्टको १२ घरले के प्रतिनिधित्व गर्छ? तपाईंको जन्म चार्टमा, सबै ग्रहहरू १२ ज्योतिषीय घरहरूमा छरिन्छन्, जुन प्रत्येक तपाईंको जीवनको फरक क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्दछ। जन्म चार्टमा ओभरल्यापिpping स्लाइसहरूको दोस्रो सेटले राशिफलका १२ संकेतहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ, र यो सबैको लागि फरक देखिन सक्छ ।१.1। २०१।
कुन ग्रह सम्बन्धको लागि जिम्मेवार छ?
कुन ग्रह सम्बन्धको लागि जिम्मेवार छ? ग्रह वीनस
तपाईं पहिलो बैठक चार्ट कसरी गर्नुहुन्छ?
तपाईं पहिलो बैठक चार्ट कसरी गर्नुहुन्छ? पहिलो बैठक चार्टले संकेत गर्छ कि कुन ऊर्जाको उपस्थिति रहेको छ बैठकमा या त सहायता गर्न वा यसको विकासमा बाधा पुर्‍याउन। कसरी पहिलो बैठक चार्ट बनाउने: एक नैटल चार्ट सिर्जना गर्नुहोस् उस्तै प्रकारले तपाई व्यक्तिको लागि, तर सही समय र स्थान प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईले अर्को व्यक्तिलाई भेट्नुभयो।
तपाईं कसरी जन्म चार्टमा retrogrades भेट्टाउनुहुन्छ?
तपाईं कसरी जन्म चार्टमा retrogrades भेट्टाउनुहुन्छ? जाँच गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईंसँग तपाईंको जन्म चार्टमा एक प्रतिगामी ग्रह छ भने astro.com> निःशुल्क राशिफल> तपाईंको चार्ट सिर्जना गर्न विस्तारित चार्ट चयनमा जानुहोस्। त्यसोभए, यदि तपाईंले ग्रह स्थानहरूको तालिका हेर्नुभयो भने तपाईं कुनै ग्रहको स्थान पछाडि 'r' देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईंलाई यो बताउन दिनुहुन्छ कि यो retrorad.25 हो। २०१।
यसको अर्थ के हो जब सूर्य कन्ज्याक्ट बुध हो?
यसको अर्थ के हो जब सूर्य कन्ज्याक्ट बुध हो? सूर्य र बुधको बीचको प्राकृतिक संयोजनको अर्थ तपाईंको दिमागले तपाईंको मुटुलाई नियन्त्रण गर्दैछ जब यो महत्त्वपूर्ण जीवनको निर्णयहरू आउँदछ। सूर्य कन्ज्याक्ट बुध पारगमनको क्रममा, हामी दिमाग र संचारका मामलाहरूमा बढी केन्द्रित हुने गर्छौं, यो एक धेरै अवलोकनकर्ता समय हो ।२। २०२०।
सूर्य कंजैक्ट आरोहणको अर्थ के हो?
सूर्य कंजैक्ट आरोहणको अर्थ के हो? सूर्य कन्जेक्ट आरोही जन्मले राष्ट्रपति वा राजा हुन आवश्यक गुणहरू दिन्छ। सूर्योदयमा जन्म भएकोले तपाईंले याद गर्नुहुनेछ। तपाईं गर्मी र प्रकाश लाई प्रकाश पार्नुहुन्छ र हरेक सूर्योदयमा जीवन दिने उर्जाको फुट गर्नुहुन्छ। तपाईंको व्यक्तित्वको चमकले तपाईंलाई कमाण्डि presence उपस्थिति प्रदान गर्दछ। २०१।
के हुन्छ जब बृहस्पति पक्ष सूर्य?
के हुन्छ जब बृहस्पति पक्ष सूर्य? सूर्य पनि एक व्यक्तिको क्यारियर र लक्ष्य हो, त्यसैले बृहस्पति यसलाई संयोजन वा यसलाई एक पक्षले ठूलो बनाउनेछ, अधिक साहसी, ग्रान्ड अधिक प्रेरणादायक योजनाहरू र उनीहरूको लक्ष्यहरू, क्यारियर र जीवनको लागि दृष्टिकोण, यसैले प्रायः यस संयोजनका मानिसहरू मान्न सकिन्छ। दर्शनहरू र जीवनमा ठूला चीजहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्!
यसको मतलब के हो यदि मेरो सूर्य र चन्द्रमा सँगै छन्?
यसको मतलब के हो यदि मेरो सूर्य र चन्द्रमा सँगै छन्? तसर्थ, जब कुनै व्यक्तिको सूर्य कन्जेक्ट चंद्रमा हुन्छ, यो समान इकाईको डबल खुराकको रूपमा व्याख्या गर्न केहि सुरक्षित हुन्छ। सूर्य 'चाहानुहुन्छ' भन्ने अर्थसँग पigned्क्तिबद्ध हुन्छ, जबकि चन्द्रमाको अर्थ 'आवश्यकताहरू' हुन्छ। यस प्रकार, त्यस्ता व्यक्तिहरूको ध्यान एक चीजमा केन्द्रित हुन्छ किनकि उनीहरूको आवश्यकताहरू र चाहनाहरू उस्तै हुन्छन्।
सूर्य कञ्जेक्ट प्लूटोको अर्थ के हो?
सूर्य कञ्जेक्ट प्लूटोको अर्थ के हो? सूर्य कञ्जेक्ट प्लूटो जहाँ प्रकाश र अँध्यारो टकराउँदछ। सूर्य तपाईको परिचय हो, तपाई को हो। सूर्य कंज्याक्ट प्लूटोले तपाई कहाँ छ भन्ने कुरा देख्न इन्कार गर्छ। सूर्य कंज्याक्ट प्लूटो तपाइँ तपाइँ को हो को सत्य को सामना गर्न सोध्छन् ।११। २०१।
यदि शनिको सूर्यको पक्षहरू हुन्छ भने के हुन्छ?
यदि शनिको सूर्यको पक्षहरू हुन्छ भने के हुन्छ? यदि सूर्य र शनि तपाईंको कुंडलीमा एक कठिन पक्ष बनाउँछ भने, शनि (कार्य, उपलब्धि) inexorably तपाईंको जीवन उद्देश्य (सूर्य) मा बाँधिएको छ। यसको मतलब यो हो कि तपाईं यहाँ शनिबारका गुणहरू विकास गर्न चाहानुहुन्छ, जस्तै आत्म-अनुशासन, अखण्डता र तपाईंको लक्ष्यहरू पूरा गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न। २०१।
मेरो जन्म चार्ट पा wheel्गको अर्थ के हो?
मेरो जन्म चार्ट पा wheel्गको अर्थ के हो? पहिलो सर्कल राशि चक्र हो। १२ स्लाइसहरूले राशिफलका १२ संकेतहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यहाँ भित्री घेरा पृथ्वी को प्रतिनिधित्व गर्दछ। तपाईंको व्यक्तिगत कुंडली (तपाईंको जन्म चार्ट) मा, त्यो भित्री घेराले तपाईंको जन्म स्थानको निर्देशांक, वा सटीक स्थान प्रतिनिधित्व गर्दछ।
किन डॉन टीआई मेरो जन्म चार्टसँग सम्बन्धित छ?
किन डॉन टीआई मेरो जन्म चार्टसँग सम्बन्धित छ? अर्को सम्भावना यो छ कि तपाईं केवल कसैसँग कारणको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्न। बच्चाको रूपमा तपाईंले यति आलोचना वा भावनात्मक दुर्व्यवहार भोग्नुपर्दछ कि तपाईं आफ्नो वास्तविक व्यक्तित्वलाई दबाउन वा नकारमा हुनुहुन्छ। लगभग सबैको मन नपर्ने सुविधाहरू हुन्छन् जुन तिनीहरूको जन्म चार्टमा देखा पर्नेछ।
म कसरी मेरो जन्म चार्ट विश्लेषण गर्न सक्छु?
म कसरी मेरो जन्म चार्ट विश्लेषण गर्न सक्छु? तपाईंको चिन्ह लगाउनुहोस्। तपाईंको ज्योतिष चार्टमा, सानो व्यक्ति केन्द्रमा विश्वमा कोरिएको छ। व्यक्ति तपाईंको जन्म स्थानको रेखा रेखा बिन्दुको शीर्षमा कोरिएको छ। ताराहरू, ग्रहहरू, र संकेतहरू तपाईंको जन्म मितिमा तिनीहरू कसरी देखा पर्दछन् भन्ने सम्बन्धमा कोरिएका छन्।
मेरो चार्टमा चिरोन कुन घरमा छ?
मेरो चार्टमा चिरोन कुन घरमा छ? तपाइँको ज्योतिषीय चार्टमा चिरोन फेला पार्नुहोस्। अक्सर 'घाइतेलाई निको पार्ने' भनेर चिनिन्छ, चिरोन एक क्षुद्रग्रह हो जुन यूरेनस र शनिको बीचमा हाम्रो सौर्यमण्डलको परिक्रमा गर्दछ। उदाहरणको लागि, बेन्सनले मिस्टीकल एएफमा लेखेका छन्, उनको जन्म चिरोन मिथुनको मिथ्यामा छन् सृजनात्मकताको पाँचौं घर। २०२०।
तपाईको जन्म चार्टमा चिरोनको अर्थ के हो?
तपाईको जन्म चार्टमा चिरोनको अर्थ के हो? दुखाइ र उपचार
कम्पोजिट र synastry चार्ट बीचको भिन्नता के हो?
कम्पोजिट र synastry चार्ट बीचको भिन्नता के हो? समग्र चार्ट मिडपॉइन्ट्सको विज्ञानमा आधारित छ र सिनास्ट्री भन्दा फरक जुन यो तुलना गर्दछ, यसले दुई चार्टहरूलाई एकमा जोड्दछ जुन दुई व्यक्तिको सम्बन्ध परिभाषित गर्दछ।